Zvishongedzo Zvishandiso Vagadziri & Vatengesi - China Zvishongedzo Zvishandiso Fekitori
Muchinjikwa Kusona Cotton Thread YeIjipita Cotton Ruvara Cotton Embroidery Thread 981457A
Chigadzirwa Parameter 24 Monochrome yakashongedzwa tambo muraraungu muraravara wekushongedza floss. Six Strand Embroidery Floss inopatsanurwa, polyester uye shinda yekotoni yakagadzirwa kubva kune yakanyanya kunaka refu staple cotton fibers. Iyo yakapetwa kaviri kune isinganzwisisike sheen, uyezve iri colorfast uye inopera inopokana. Muchinjikwa wekusona floss unogona kushandiswa kugadzira hushamwari zvishongo, Muchinjikwa Kusona, Embroidery, zvigadzirwa zvevana, Kusona, Kuruka, DIY, Crochet uye zvichingodaro .. Inokodzera vana, shamwari, moms, grand moms, ...
8 Mamita 6 Strands Polyester Cotton Embroidery Thread Polyester Cotton Muchinjikwa Tambo Thread6310007
Chigadzirwa Parameter 100 pcs / 50pcs akaisirwa akachinjika makotoni tambo shinda yekushongedza tambo muchinjikwa tambo yakaitwa nemaoko yekotoni tambo yeiyo DIY toy. Six Strand Embroidery Floss inopatsanurwa, polyester uye shinda yekotoni yakagadzirwa kubva kune yakanyanya kunaka refu staple cotton fibers. Iyo yakapetwa kaviri kune isinganzwisisike sheen, uyezve iri colorfast uye inopera inopokana. Muchinjiko wekusona floss unogona kushandiswa kugadzira hushamwari zvishongo, Muchinjikwa Kusona, Embroidery, hunyanzvi hwevana, Kusona, Weaving, DIY, Crochet ...
.Wholesale Eco Shamwari Yakagadzirwa Neruvara Cotton Yakarukwa Floss Embroidery Thread Cross Stitch Kusona Thread6310009
Chigadzirwa Parameter makumi masere makumi masere tambo dzakashongedzwa shinda yakashongedzwa nemurongi bhokisi rekushongedza kit. Yakakwira-mhando embroider tambo yakajeka ruvara, stereoscopic, yakasimba simba, kupfeka kuramba, usapera, usatsemuka zvakaputsika nyore nyore. Yakakwira mhando uye yakasimba, tambo yekushongedza yakaitwa neyakareruka, akatsetseka uye akasviba polyester. Nyore kushandisa, Imwe neimwe floss ndeye 8m kureba uye yega yega skein yekushongedza floss inouya mumatanho matanhatu. Muchinjikwa wekusona floss unogona kushandiswa kugadzira hushamwari bracelet ...
100 Ruvara DIY Rakajeka Cotton Thread Yakarukwa Yakashongedzwa Muchinjikwa Stitch Wiring Manual DIY Ruvara Cotton Thread6310006
Makara zana DIY yakashongedzwa yekotoni shinda yakashongedzwa shinda muchinjiko wiring manyore DIY diyoni donje tambo. Yakakwira-mhando embroider tambo yakajeka ruvara, stereoscopic, yakasimba simba, kupfeka kuramba, usapera, usatsemuka zvakaputsika nyore nyore. Yakakwira mhando uye yakasimba, tambo yekushongedza yakaitwa neyakareruka, akatsetseka uye akasviba polyester. Nyore kushandisa, Imwe neimwe floss ndeye 8m kureba uye yega yega skein yekushongedza floss inouya mumatanho matanhatu. Muchinjikwa wekusona floss unogona kushandiswa kugadzira hushamwari zvishongo, Muchinjikwa Kusona, Embroidery, hunyanzvi hwevana, Kusona, Weaving, DIY, Crochet zvichingodaro. Inokodzera vana, shamwari, vanamai, vanamai vakuru, vatinoshanda navo, vavakidzani kana vatangi vekuyambuka kana kufarirwa.
Makumi makumi mashanu / zana emakesi eshinda Yakarongedzwa Yekushongedza Muchinjikwa tsono Knitting Mumaoko Ruvara Thread Muchinjikwa Musono Cotton Kusona 6310001
50/100 Mavara Wholesale Eco-Inoshamwaridzika nemaoko akavezwa kotoni
yakarukwa tambo yakashongedzwa shinda muchinjiko wekusona tambo.
Yakakwira-mhando embroider tambo yakajeka ruvara, stereoscopic, yakasimba simba,
pfeka kuramba, usapera, usatsemuka zviri nyore kuputswa. Yakakwira mhando uye yakasimba,
shinda yekushongedza inogadzirwa neyakareruka, akatsetseka uye akasviba polyester. Nyore kushandisa,
Imwe neimwe floss ndeye 8m kureba uye yega yega skein yekushongedza floss inouya mumatanho matanhatu.
Muchinjikwa wekusona floss unogona kushandiswa kugadzira hushamwari zvishongo, Muchinjikwa Musono,
Embroidery, hunyanzvi hwevana, Kusona, Kuruka, DIY, Crochet zvichingodaro. Inokodzera
vana, shamwari, vanamai, vanamai vakuru, vatinoshanda navo, vavakidzani kana vatangi vekuyambuka kana nyasha.